Canada - 'RCMP off Wet'suwet'en land': Soldị n'otu na-etolite maka ndị na-agbachitere ala - TELES RELAY
Montreal, Canada - Canada na-eche nsogbu mba ihu.
Ọ bụ otu a ka Sophia Sidarous, onye na-eto eto na-ahazi ụmụ amaala na onye otu Metepenagiag First Nation na New Brunswick si kọwaa mmetụta ahụ n'izu a, dịka ndị mmadụ gafere Canada wee pụta iji kwado ndị otu Wet'suwet'en Nation bụ ndị a manyere ịpụ n'ala ọdịnala ha.
Sidarous dị n'etiti ihe dị ka mmadụ iri na abụọ bi n'ọfịs Ottawa nke minista ikpe ziri ezi na onye ọka iwu ukwu nke Canada, David Lametti, na Mọnde na nkwado nke ndị na-agbachitere ala Wet'suwet'en na-emegide ọrụ ọkpọkọ mmiri na mpaghara ha na mgbago ugwu British Columbia (BC) ).
“Anyị chọrọ ichetara ya… na o nwere ọrụ ọ ga-arụ iji mezuo,” ka Sidarous gwara Al Jazeera na mkparịta ụka ekwentị, “gụnyere ịkwado ikike mmadụ… [na] ịkwado mmekọrịta mba na mba, nke apụtaghị na ị nwere iji bulldoze ndị mmadụ iji nweta ọrụ n'ime. "
Ndị uwe ojii Federal (RCMP) na mbido ọnwa a chụpụrụ ndị otu Wet'suwet'en Nation si n'ókèala ọdịnala ha, ebe ha guzobere ogige iji gbalịa ịkwụsị ọrụ na oru GasLink Coastal.
Ndị na-akwado ndị otu Wet'suwet'en Nation Indigenous ndị na-emegide iwu nke pipeline GasLink Coastal, na-eme mkpesa na mpụga isi obodo nke ndị uwe ojii Royal Canadian Mounted na Surrey, British Columbia [Jesse Winter / Reuters]
Ndị Wet'suwet'en ndị nketa, ndị nwere ikike karịrị 22,000sq kilomita (8,494sq) Ala, kwuru na ha anabataghị pipoo 670km (416-mile), nke ga-ebife mpaghara ahụ iji buru gas sitere na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ BC gaa ọdụ ụgbọ ala dị nso n'obodo Kitimat.
Supremelọ ikpe Kasị Elu nke BC na Disemba nyere GasLink iwu ka ọ gaa n'ihu na-arụ pipeline, ụlọ ọrụ ahụ wee kwuo na ya na ndị otu ọgbakọ ndị otu 20 First Nations gbapụrụ n'ụzọ. Mpaghara ahụ na-ekwukwa na ọrụ ahụ nwere ikike dị mkpa iji gaa n'ihu. "Ọrụ a na-aga n'ihu na iwu nke iwu kwesịrị inwe mmeri na BC," Premier John Horgan kwuru n'ọnwa gara aga.
Ndị isi a ketara eketa na-arụ ụka na otu kansụl ndị otu ahụ nwere ikike pere mpe n'ihe na-eme na nchekwa, obodo ndị izizi nke mbụ mebere n'okpuru Iwu Indian Indian, ebe ha nwere ikike ikpebi mpaghara ọdịnala mba ahụ. Thelọikpe Kasị Elu nke Canada kpebiri na 1997 na ndị isi agbụrụ Wet'suwet'en enyeghị ikike ịchị ala ha.
Ihe ị na-eme otu onye Indigenous ma ọ bụ otu ụmụ amaala na-emetụta ndị amaala niile gafee Canada, gafee Turtle Island [North America] na gafee ụwa.
Sophia Sidarous, onye otu Metepenagiag First Nation
E jidere ihe karịrị mmadụ iri na abụọ Wet'suwet'en na-agbachitere ala na ndị na-akwado ha, APTN kọọrọ, na mwakpo RCMP dị iche iche n'okporo ụzọ ọhịa ebe e guzobere ogige na mgbochi iji gbochie iwu na pipeline.
“Mgbe anyị hụrụ na ndị mba ọzọ anaghị asọpụrụ ndị okenye dị ka ụlọ ọrụ pipeline na mgbe anyị hụrụ gọọmentị Canada anaghị asọpụrụ ikike ụmụ amaala, nke ahụ anaghị eso anyị agba nkịtị,” ka Sidarous kwuru. “Ihe ị na-eme otu onye Indigenous ma ọ bụ otu ụmụ amaala na-emetụta ndị amaala niile gafee Canada, gafee Turtle Island [North America] na gafee ụwa. "
Njikọ ọnụ omume
Sidarous bụ otu n'ime ọtụtụ ụmụ amaala gafee Canada ndị haziri omume na ịdị n'otu na ndị isi agbụrụ Wet'suwet'en na ndị na-agbachitere ala.
A haziri Rally, ịnọ ọdụ na mgbochi na mpaghara dị iche iche site n'ụsọ oké osimiri gaa n'ụsọ oké osimiri iji rịọ ka ndị ọrụ RCMP hapụ mpaghara Wet'suwet'en nakwa na gọọmentị etiti na nke BC na-asọpụrụ ọbụbụeze ụmụ amaala na ikike.
Na BC, ndị mmadụ gbochiri ụzọ ịbanye na Port nke Vancouver na ngwụcha izu gara aga, ndị uwe ojii jidere mmadụ 43 na Mọnde mgbe ha jụrụ ikpochapụ mpaghara ahụ. Akwụsịwokwa okporo ụzọ nwa obere obodo Vancouver na àkwà mmiri na-abanye n'ime obodo ahụ, ebe ndị amaala obodo ahụ na ndị na-akwado ha gbochiri ịbanye n'ụlọ omebe iwu mpaghara na Victoria na Tuesday.
Natalie Knight, onye nhazi Yurok na Navajo nke mebere na Vancouver, so n'etiti ọtụtụ ndị mmadụ ji ọrụ n'ụlọ ọrụ ọka iwu BC David Davidby n'ụtụtụ Tọzdee.
Knight gwara Al Jazeera na mkparịta ụka ekwentị site na ịnọdụ ala na ndị mmadụ na-akpọ Eby ka ọ kwanyere iwu Wet'suwet'en ùgwù ma kwado ụkpụrụ nke Nkwupụta nke United Nations na Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), n'etiti ihe ndị ọzọ.
Ndị na-akwado ndị otu Wet'suwet'en Nation Indigenous ndị na-emegide iwu nke pipeline GasLink Coastal, na-eme ngagharị iwe site na igbochi ụzọ na mpụga isi obodo nke ndị uwe ojii Royal Canadian Mounted na Surrey, British Columbia [Jesse Winter / Reuters]
Edere iwu na BC na November 2019, UNDRIP na-ekwu na ụmụ amaala kwesịrị ịnwe "nnwere onwe, nnabata na nnabata" n'ihe metụtara ikike ha, gụnyere ọrụ mmepe akụ dị ka Coastal GasLink.
Knight kwuru, "Oge a bụ oge iji mee ihe ma gosipụta nkwenye anyị.
O kwuru na ọtụtụ ndị agbakọtala gburugburu Wet'suwet'en n'ihi na igodo mgba ha na-etinye n'okwu ndị miri emi dịka ikike ụmụ amaala na ọbụbụeze ụmụ amaala, yana ịgbatị ọchịchị na Canada. "Ndị mmadụ na-agbakọta ọnụ, a na-ewukwasị obodo n'ụzọ dị egwu n'okporo ámá," ka ọ gbakwụnyere.
Blockedgbọ okporo ụzọ egbochi
Emechiela ụzọ ụgbọ oloko dị na njikọ nke Wet'suwet'en.
N'ehihie Tọzdee, Via Rail Canada - ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè ndị njem nke mba ahụ - kwupụtara na ọ na-akagbu ọrụ yana netwọkụ ya "rụọ ọrụ ozugbo na rue ọkwa ọzọ". Via Rail na-arụ ọrụ karịa ụgbọ oloko 500 kwa izu gafere 12,500km (7,767 kilomita), ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu.
A kwụsịtụrụ ọrụ ahụ n'okporo ụzọ ụgbọ oloko Toronto-Montreal n'ihi nkwụsị nke Tyendinaga Mohawk Territory na Ontario. Ihe karịrị ụgbọ oloko 250 na ihe karịrị ndị njem 42,000 ka emetụtara, CBC News kọrọ na mbido izu a, ebe ndị ọkachamara ụlọ ọrụ kwuru na ọtụtụ nde dollar efuola n'ihi nkwụsị ahụ.
E mekwara mgbochi ndị ọzọ yiri ya n'ebe ugwu BC na Manitoba, ógbè dị n'etiti Canada.
Gidimt'en Access Point, mkpọchi na ogige nke ndị otu Wet'suwet'en Nation Gidimt'en wuru, nabatara ozi banyere mmechi Via Rail na Thursday. “Kanada na-emechi iwu! Anyị nwere obi ekele maka omume niile nke ịdị n'otu, "otu ahụ dere na Facebook. “Nọgide na-enwe nrụgide! Anyị chọrọ RCMP na CGL anya anyị yintah [ala]! Anyị agaghị akwụsị ruo mgbe ha biri. "
Warmnọgide na-ekpo ọkụ na mgbochi Halifax mgbochi nke #wetsuweten, ugbu a 3.5 awa siri ike!#ShutCanadaDown #ShutDownCanada #wetsuwentenstrong #Unistoten #unistotensolidarity #AllEyesOnWetsuweten pic.twitter.com/PQ3MZUNZyx
- Sakura Saunders (@ sakura1979) February 11, 2020
South nke Montreal nke dị na Quebec, a manyekwala ụgbọ okporo ígwè Canadian Pacific Railway ịkwụsị ọrụ mgbe ndị mmadụ si Kahnawake Mohawk First Nation guzobere mgbochi na ókèala ha na ịdị n'otu na ndị isi agbụrụ Wet'suwet'en .
N’ụtụtụ Tọzdee, mmadụ anọ gbara gburugburu gbara ọkụ n’akụkụ mkpọchi Kahnawake. Oche oche rọba nọdụrụ n’elu nnukwu snow nke a dọbara n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị n’azụ ha. "RCMP OFF Wet'suwet'en LAND" gụọ akara ngosi kaadiboodu na - adabere n'akụkụ snowbank n'akụkụ ọkọlọtọ uhie uhie nke Mohawk Warrior Society. “Ọ dịghị ọkpọkọ! »Gụọ ọzọ.
Ihe ịrịba ama sitere na Kahnawake, mba mbụ nke Mohawk, ebe ndị mmadụ guzobere mgbochi [Jillian Kestler D'Amours / Al Jazeera]
Ndị mmadụ nọ na mgbochi azaghị arịrịọ Al Jazeera maka nkọwa. “Anyị na-alụ ọgụ ka ha nwee ike ibi na obodo ebe ndị nweere onwe ha na mmiri dị ọcha. Anyị na-alụ ọgụ maka ndụ, ”James Nolan, bụ onye nọ n'ebe ahụ n'izu a, gwara akwụkwọ akụkọ Montreal Gazette.
Na obodo dị nso nke Delson, Quebec, ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na akara ahụ metụtara efu na Tọzdee. "A kwụsịrị ọrụ n'ihi ngagharị iwe dị n'akụkụ ụzọ ụgbọ oloko ahụ," gụrụ otu ozi na French nke gosipụtara na ihuenyo ụgbọ okporo ígwè.
"Ọ bụ ihe na-akpali akpali ma dị ike nke ukwuu ile anya n'ihi na nke a bụ ngosipụta kachasị ukwuu nke ọbụbụeze kemgbe Rock guzoro," Catie Galbraith kwuru, 19, na-ezo aka na ụmụ amaala-edu otu mmegide na Dakota Access Pipeline oru ngo na United States.
“Ọ dịka ọ dị anyị ka anyị agbanweela, na ụmụ amaala siri ike karịa ka anyị sirila na anyị na-alụ ọgụ n’ụzọ ga-arụ ọrụ nke ọma karịa ka ọ dịbu. Ọ dị ya ka ọ bụ na anyị nọ na njedebe nke ezigbo mgbanwe. "
Galbraith, onye otu Chickasaw Nation nke Oklahoma na onye isi oche nke igenlọ Akwụkwọ Indigenous Student Alliance na Mahadum McGill dị na Montreal, nyere aka ịhazi nnọkọ na Fraịde ikpeazụ na ngosipụta na Mọnde na Prime Minista Canada. Justin Trudeauụlọ ọrụ ndị isi obodo na obodo.
Ihe ruru mmadụ iri atọ sonyere na oche ahụ, ka o kwuru, ebe narị mmadụ ole na ole sonyere na ngagharị iwe ahụ. "Enwere ụdị mmetụta nke ime ihe," Galbraith gwara Al Jazeera.
Nke a kpaliri ndị mmadụ ime ihe n'ihi na ejidere onye otu ụmụ amaala na McGill n'otu ogige ogige Wet'suwet'en. Ọ gbakwụnyere, "Ọ dara ezigbo nso n'ụlọ,"
Na Wednesde, Horgan, onye isi ala nke BC, katọrọ mkpakọ ịdị n'otu nke Wet'suwet'en na-adịbeghị anya na Victoria. "Ọ bụ ihe a na-anabataghị nke m ma ama m na ọ bụ ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị Columbians Britain anabataghị ya," Horgan kwuru banyere ndị sonyere na-egbochi ndị ọrụ ịbanye na ndị omebe iwu mpaghara ahụ.
“Ngosiputa nke udo bu ihe di nkpa maka oganihu anyi dika ochichi onye kwuo uche ya, mana ka otu ndi mmadu gwa ndi ozo, si, Ikwesighi izi ezi. Anabataghị gị ebe a. Are na-n'ụzọ ụfọdụ a na-ere-ụkpụrụ nke Canada, 'bụ nnọọ doro anya na-ezighị ezi, ”o kwuru, sị.
N’uhuruchi Tọzdee, Supremelọikpe Kasị Elu nke BC nyere iwu na-enye ndị ọchịchị ikike ijide onye ọ bụla na-egbochi ọrụ nke ndị omeiwu ma ọ bụ igbochi ịbanye n’ụlọ ndị ahụ. Ndị mmadụ ga-atụkọta ọfịs gọọmentị BC na Fraịde iji gosipụta nkwado na-aga n'ihu maka Wet'suwet'en.
Trudeau kwuru okwu banyere ngagharị iwe n'izu a, na-ekwu na ebe ọ na-akwanyere ikike ndị mmadụ nwere ime ngagharị iwe n'udo, Canada "bụkwa obodo nke iwu".
“Anyị kwesịrị ịgba mbọ hụ na a na-akwanyere iwu ndị ahụ ùgwù. Ọ bụ ya mere m ji agba ndị niile ume ka ha kwurịta okwu iji dozie nke a ngwa ngwa o kwere mee, "praịm minista ahụ, bụ onye kwere nkwa na ya na ụmụ amaala ga-abụ ihe kacha mkpa, gwara ndị nta akụkọ.
Ka ọ dị ugbua, Minista Na-ahụ Maka Ọrụ Na-ahụ Maka Marcmụ amaala Marc Miller na Thursday kwere nkwa izute ụfọdụ n'ime ndị ndu mkpesa ma ọ bụrụ na ha kwere nkwa ịkwụsị ịkwụsị okporo ụzọ ha.
Mana Knight kwuru na ya na ndị ọzọ adaghị mbà n'ihi na emezughi ihe ha chọrọ. “N'otu mmụọ nke [ndị Wet'suwet'en] ndị isi ihe nketa na-adịghị eguzo, na RCMP na-emekpa anyị…, anyị ga-eme otu ihe ahụ n'okporo ámá ndị a na Vancouver. Anyị anaghị eguzo. "
===> More isiokwu na CANADA ebe a = =
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.aljazeera.com/news/2020/02/wet-land-solidarity-grows-land-defenders-200214163301407.html
Nyefee Okwu: Arsenal na Chelsea na-aga agha maka Isco maka oge okpomọkụ